Nzuzo nke na - eto eto na ite - Mkpụrụ ubi - 2019
Zinnia: esi edozi ifuru na ulo
Osisi okooko osisi kwa afo ka esi eji nwayo na-eto eto n'ulo. Zinia naanị na-ezo aka na otu n'ime ndị a. Ala nna nke osisi a bụ Central America na Mexico. Naanị ihe mgbochi nke osisi a bụ na ọ bụ kwa afọ, mana maka ezigbo ndị mara mma ọ gaghị abụ nsogbu. A na-eji ya eme ihe dị ka Zinia ogige nke dị na narị afọ nke 18, taa a na-ejikwa ya eme ihe nke ọma na-eto eto n'ime ụlọ.
Ị ma? Ogige Zinnia bụ akara nke Indiana site na 1931 ruo 1957.
N'oge a, e nwere nnukwu ụdị ụdị zynia, ma ọ bụ n'ụdị okooko osisi ka a na-ahụ ha, ma e nwere ụdị ndị dị iche iche, dịka dahlias, cacti, na ụdị dị iche iche. Zinnia anaghị etinye aka n'ịchọ osisi, ilekọta ya n'ụlọ anaghị ewe oge.
Ị ma? Zinia - aha mbụ nke ifuru na ala nna, ndị na-elekọta ubi anyị na-akpọ okooko osisi a isi.
Ebe na ọkụ
Na-elekọta ndị isi n'ụlọ
Nsogbu puru iche na-eto eto
Ọnọdụ kacha mma maka na-eto eto zinnia n'ime ite
Zinia hụrụ okpomọkụ, ìhè, ma na-achọ ohere, n'ihi ya ọ na-etolitekarị na akpa. Ọ bụ ezie na a na-ewere isi dị ka ihe ndina osisi, ọ na-eto nke ọma n'ụlọ. Ọzọkwa, ọ dị mfe karị ịmepụta ọnọdụ kachasị mma maka nkwụsị n'ụlọ karịa mgbe e toro n'èzí. Mgbe ị na-eto eto na osisi, ọ dị mkpa ka ichere ruo mgbe ezi akwụkwọ dị na seedlings, n'oge a, ọ dị mkpa iji transplant gri n'ime ite.
Ala maka tsiniya kacha mma sod. Iji meziwanye ọmụmụ, ị nwere ike ịgbakwunye obere ala sod na peat ya - nke a ga-emetụta àgwà okooko.
Nke mbụ, họrọ ebe sara mbara maka ifuru. Zinia na-achọ ebe a ga-enwe ezigbo ọkụ, ya mere, iji wee na-eto ya n'ime ụlọ, ọ ka mma ịhọrọ ebe ndịda.
Okooko osisi kwesiri ikpo oku, n'agbanyeghi oge nke afo n'èzí window. Zinia chọrọ ijiri okpomọkụ nke 24-26 ° C, ọbụna n'oge oyi.
Zinia nwere mmetụta dị ukwuu n'ime ite ma ọ dịghị achọ nlekọta nrụgide, ọ ga-ezuru ịgbaso ndụmọdụ dị mfe.
Osisi ahụ hụrụ mmiri n'anya, ma ọ kaghị uru ị na-ehicha ala.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ọ bụ ihe kpatara ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime ụlọ ebe zinia dị na-esi na ya kachasị mma, mgbe ahụ, ọ bara uru iji dozigharị mmiri dị ka: ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ na-ebili, mgbe ahụ, ịkwanye mmiri ọkụ kwesịrị ịbawanye, ọ bụrụ na ọ gbadata, belata ya.
Zinia hụrụ mmiri n'anya, iji nọgide na-enwe mmiri dị mma, nkwụsị na-ezuru otu ugboro n'izu. Ọchịchị a dị mkpa n'oge okpomọkụ, oge fọdụrụnụ ị nwere ike ịkụ osisi ahụ adịghị njọ.
A na-eji nri ndị na-edozi ahụ na-eri nri. Ọ bụ iji fatịlaịza a ifuru 1-2 ugboro n'ọnwa.
Ihe nfe maka tsiniya abughi egwu, o siri ike. Nsogbu kachasị njọ na-eto eto zini bụ ihicha akwụkwọ. O yikarịrị ka ọ bụ okwu iru mmiri, osisi ahụ enweghị ya. Ọ dị mkpa iji mee ka ịme ihe na ịgbara mmiri ka njọ. Ọzọkwa, mgbe ụfọdụ, nsogbu ahụ na-adaba n'ụba anyanwụ, n'ihi na nke a bụ iji tinye ite ahụ n'okpuru ndo ruo oge ụfọdụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, tsine adịghị ewe oge dị ukwuu, mgbe ọ na-agbapụkwa, ị gaghị akwa ụta na ị kpebiri ịmalite ifuru a mara mma n'ụlọ gị.
Kedu ka esi na-etolite ata ohia na ulo? Ndị a ma ama
Kedu otu esi echekwa na pasili maka oyi, ma enwere uru ya?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Zinnia: esi edozi ifuru na ulo